Izimo Ezivamile | Law & More B.V.
Inkampani » Izimo Ezivamile
1. Law & More B.V., esungulwe e-Eindhoven, eNetherlands (ngemuva kwalokhu ebizwa ngokuthi "Law & More”) Yinkampani enesikweletu esilinganiselwe, esungulwe ngaphansi komthetho waseDashi ngenhloso yokwenza umsebenzi wezomthetho.
2. Le mibandela ejwayelekile isebenza kuzo zonke izabelo zamakhasimende, ngaphandle kokuthi kuvunyelwene ngenye indlela ngokubhala ngaphambi kokuphela kwesabelo. Ukusebenziseka kwemibandela yokuthenga ejwayelekile noma ezinye izimo ezijwayelekile ezisetshenziswa yikhasimende akuveziwe.
3. Zonke izabelo zeklayenti zizokwamukelwa kuphela futhi zenziwe Law & More. Ukusebenza kwendatshana 7: 407 isigaba 2 I-Dutch Code Ikhishwe ngokusobala.
4. Law & More lenza izabelo ngokuya ngemithetho yokuziphatha yeDashiy Bar Association futhi, ngokuya nale mithetho, izibophezela ukungadaluli noma imiphi imininingwane enikezwe ikhasimende maqondana nesabelo.
5. Uma maqondana nemisebenzi enikezwe yona Law & More abantu besithathu kufanele babandakanyeke, Law & More izobonisana neklayenti ngaphambi kwesikhathi. Law & More ayinasibopho sokushiyeka kwanoma yiluphi uhlobo lwaleli qembu lesithathu futhi inelungelo lokwamukela, ngaphandle kokubonisana okubhalwe phansi futhi egameni leklayenti, umkhawulo wesibopho ongase ube khona ngakolunye uhlangothi lwesithathu obandakanyeke Law & More.
6. Noma yisiphi isikweletu sikhawulelwe enanini elizokhokhwa kuleso simo esithile ngaphansi komshuwalense wesikweletu oqeqeshiwe we Law & More, inyuswe ngokungaphezulu okukhokhwayo ngaphansi kwalo mshwalense. Lapho, ngasiphi isizathu, kungakhokhwa ngaphansi komshuwalense wesikweletu ochwepheshe, noma yisiphi isikweletu sikhawulelwe enanini le- € 5,000.00. Ucele, Law & More inganikeza imininingwane nge (ukumbozwa ngaphansi kwe) yomshuwalense wesibopho semisebenzi ephumile njengoba kukhishwe Law & More. Amakhasimende afaka phakathi Law & More futhi ibambe Law & More akunangozi ngokumangalelwa kwabantu besithathu maqondana nomsebenzi owabelwe.
7. Ukuze kwenziwe isabelo, iklayenti likukweleta Law & More inkokhelo (kanye ne-VAT). Imali ibalwa ngesisekelo senani lamahora asetshenziswe aphindwe ngenani lehora elisebenzayo. Law & More inelungelo lokuguqula ngezikhathi ezithile amanani ayo ehora.
8. Ukuphikisana nenani le-invoice kufanele kugqugquzelwe ekubhaleni nasekuhanjisweni Law & More ezinsukwini ezingama-30 ngemuva kosuku lwe-invoice, ukwehluleka lapho i-invoice izokwamukelwa ngokuqondile futhi ngaphandle kokubhikisha.
9. Law & More ingaphansi komthetho i-Dutch Anti-Money Laundering kanye ne-Anti-Terrorist Financing Act (Wwft). Uma isabelo esithile singaphansi kweWwft, Law & More izokwenza iklayenti ngokukhuthala okufanele. Uma kwenzeka (okwenzelwe) ukuthengiselana okungajwayelekile ngaphakathi kwengqikithi yeWwft, khona-ke Law & More uphoqelekile ukuthi abike lokhu kuPhiko Lwezimali ZaseDashi. Imibiko enjalo ayivezwanga kwikhasimende.
10. Umthetho waseDashi uyasebenza ebudlelwaneni phakathi Law & More neklayenti.
11. Uma kwenzeka impikiswano, inkantolo yamaDashi e-Oost-Brabant izoba negunya ngokomthetho wokuthi Law & More uhlala enelungelo lokuhambisa izingxabano enkantolo ebizoba namandla uma lokhu kukhethwa kwenkundla bekungeke kwenziwe.
12. Noma yiliphi ilungelo lekhasimende lokufaka izicelo zokuphikisana nalo Law & More, izophela kunoma yisiphi isenzakalo kungakapheli unyaka owodwa ngemuva kosuku ikhasimende eliqaphele ngalo noma okungenzeka ukuthi laliwazi ngobukhona balamalungelo.
13. Amarisidi we Law & More izothunyelwa kwiklayenti nge-imeyili noma ngeposi elijwayelekile futhi inkokhelo kufanele yenzeke kungakapheli izinsuku eziyi-14 ngemuva kosuku lwe-invoice, yehlulekile ukuthi yiliphi iklayenti elihluleka ngokomthetho futhi liphoqelekile ukukhokha inzalo emisiwe engu-1% ngenyanga, ngaphandle kwesaziso esisemthethweni esidingekayo . Ngomsebenzi owenziwe Law & More, izinkokhelo zesikhashana zingavunyelwa noma kunini. Law & More unelungelo lokucela ukukhokhwa kusengaphambili. Uma iklayenti lihluleka ukukhokha amanani afakwe ngesikhathi, Law & More unelungelo lokumisa umsebenzi wakhe ngokushesha, ngaphandle kokuphoqwa ukuthi akhokhe noma yikuphi ukulimala okuvela lapho.